पत्रकारः सङ्घीयता भनेको के हो, नेताज्यू? नेताः संखुवासभा नेपालमै पर्छ। यो राम्रो चीज हो। यस्तै हो, सङ्घीयता! जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक विल्हेम नित्सेले भनेका थिए- 'किन भन्ने जानियो भने कसरी भनेर बाँच्न पनि जानिन्छ। जब कुनै काम फत्ते गर्न मेलो पस्ने निर्णय हुन्छ, त्...
महान् काका (व्यङ्ग्य)
हेर्दाहेर्दै काका ज्येष्ठ नागरिकको कित्तामा छिरिसकेका छन्। उनका ६३ वटा वसन्त अतीत भइसकेका छन्। जतिखेर उनी धर्तीमा उम्रिए, साथमा अस्थिरतारूपी जुम्ल्याहा सन्तान पनि ल्याएका थिए। उनको उत्पत्तिको समयमा वरिपरि गरिबी, पीडा, अभाव ढकमक्क फुलेको थियो। फोहोरमा झिँगा लुटुपुटु भएझै...
अङ्ग्रेजी शब्द 'कन्स्टिच्यूसन'को नेपाली रूपान्तरण हुन्छ- संविधान! ल्याटिन भाषाको 'कन्स्टिट्यूरे'बाट आएको यस शव्दको अर्थ हुन्छ-स्थापना गर्नु। संविधानलाई मुलुकको मूल कानुन मानिन्छ, जसको आधारमा सरकार एवम् राज्यका अङ्गहरू सञ्चालन हुन्छन्। संविधानमा राज्यका नि...
संविधान र बज्जीको कथा
संविधान राष्ट्रको मुल कानुन हो, जसले शासन प्रणाली, त्यसको सञ्चालनको आधार, राज्यका अङ्गहरूबीचको अधिकार आदिको मोटामोटी चित्र दिन्छ। कुनै पनि संविधान सबैका लागि सधैँका लागि पूर्ण हुँदैन। त्यसैले यो गतिशील दस्तावेज हो। स्वाभाविक हो, समयको गति समात्न नसक्ने जटिल दस्त...
नालायक युवानेता, धर्मात्मा काका र शाहज्यादी दिदी
'हिपहिप हुर्रे! ५० को माल जिन्दावाद! यो जीत कसको आधुनिक शाहज्यादीको, महान् क्रान्तिकारी श्रमिक नेताको, यताको खाएर उताको सुन्ने सेवक लोकतन्त्रका हिमायतीको! सम्पूर्ण खाइदेउवाला विशिष्टको! यो हार कसको? कतारमा लास हराएको रत्ने माइलाको, सिरियामा लुटिएकी सुन्तलीको, मुग...
असमानतामा आधारित सम्बन्धका केही आयाम
'राम्रो छिमेकी पुरस्कार हो, खराब छिमेकी अभिसाप हो'- हेसियड संवैधानिक हैसियतमा झण्डै दुई दशकपछि भएको भारतीय राष्ट्रपतिको नेपालमा भएको राजकीय भ्रमणप्रति कौतुहल, चासो र जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो। अझ त्यसमा पनि आफ्नो संविधान आफैँले निर्माण गरेवापत पुरस्कार ...